Trial of the Crusader (10H) - Instance/Raid Guides - Welcome from War Citadel Forum
Trial of the Crusader (10H)
By Poutsa, October3in Instance/Raid Guides
ဒီ Post လေးတင်ရခြင်း အကြောင်းကတော့ TOC 10H ကို ဘယ်လို ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဆို တာ လေးနဲ့ကျွန်တော် တို့ ဘယ်လို Down သွားတယ်ဆိုတာ လေး ကိုသိ စေ ချင်လို့ပါ(ပထမဆုံး Down သွားတဲ့ Raid ဆိုတော့ကြွားချင်တာလေးလဲ ပါတာပေါ့ :P).
TOC (Trial of the Crusader) မှာဆို တော်တော် များများ BOSS တွေနဲ့ ဘယ်လို ဘယ်ပုံ လာကြလဲ ဆိုတာသိနေ ကြတော့ အစပိုင်း BOSS တွေကို တော့ ရေးပေးတော့ ဘူး ဗျာ တော်တော်ခက်ခက် ခဲခဲ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ Last Man of the TOC “Anub'arak”
ကို 45/50 attempts နဲ့ ရအောင် Down နိုင်ခဲ့တာလေး ပါ :D .
Boss ကို Pull ပီး Sec ပိုင်းအကြာ မှာ Creep2ကောင် ထွက် ပါတယ် Damage အများကြီး တော့ မပေးပါဘူး ဒါပေမယ့် Stack တတ်ပါတယ် အဲ့ဒီ Stack က တော့ ကြာလေကြာလေ စမူံ တုန်းလေ ပါပဲ,အဲ့ ဒီ Creep တွေကို မသတ်ပဲ ထားပြန်ရင်လည်း နောက် Phase တွေထိ ပါလာ ပါတယ်.(အဲ့တော့ စမူံမ တုန်းကြဖို့အရေး Creep ကို ဦးစားပေး ရိုက်ပေးဖို့ လိုပါသေးတယ်.) ပီးတော့ မနေ့က ကျွန်တော် တို့ Raid မှာ Range DPS ဆိုလို့ Shadow Priest တစ်ကောင်ပဲ ပါပါတယ်. အဲ့ဒီကိုယ်တော် တာဝန်က တော့ မိုးပေါ်က Blue Orb ကို ပစ်ဖို့ပါပဲ …Blue Orb ပစ်ရင် Blue orb က Frozen floor တွေ ကြမ်းပြင် ကို ချပေးပါတယ် (…..(Frozen floor တွေက ဘယ်လို အသုံးဝင်လဲ ?.........)
Phase-1 စပီး ၁မိနစ် ၀န်းကျင် လောက် မှာ Boss ရဲ့ Phase -2 အနေနဲ့ စတင်ပါပီ,Phase-2 မှာတော့ Boss က မြေကြီးထဲ ၀င်သွားပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ပဲ BOSS က Raid Member တွေထဲ က တစ်ယောက်ကို Spike လိုက်ထိုး ပါတယ်..မိတ်ဆွေ 1 ယောက်ထဲ ထိုးတယ်ဆိုပီး ပေါ့ပေါ့တော့ မတွေးနဲ့ဗျ လမ်း မှာ ရှိတဲ့ လူ မှန်သမျှ စမူံ တုန်းတယ် (မယုံနေကြည့် :P)… ကဲ ဒီအချိန်မှာ Phase-1 တုန်းက Frozen floor တွေ ဘယ်လို အသုံးဝင်လဲ သိရပါပီ….BOSS က Spike လိုက်ထိုးနေချိန်မှာ Raid member တွေ အကုန် Frozen Floor ပေါ်နေရာယူထားဖို့ လိုပါတယ် BOSS ရဲ့ Spike က Frozen Floor ကို မဖောက်နိုင်ပါဘူး (ဆိုလိုတာက Frozen Floor ပေါင်္တတ်နေရင် Spell မထိ ဘူုးပေါ့ဗျာ… အဲ Phase-2 မှာ ဒီ တစ်ခု ပဲ မဟုတ်ဘူး ဗျ Swarm ပေါက်စလေးတွေ ပါ ထွက်တယ် ဗျ သွေးကလည်း နည်းနည်းလေးတွေပါ. အထင်တော့မသေးစေလို ပါမိတ်ဆွေ ရေ သူတို့က တစ်ချက်ထိုး တိုင်း Stack 1 ခု တတ်ပါတယ် 1 ခုတည်းက တော့ မဆိုသလောက်ပေမယ့် ၃ခု ၄ခုလောက် အထိုးခံရရင်တော့ အသက်အန္တရာယ် ဆိုးရိမ်ရပါတယ် :D အဲ့တာမလို့အဲ့ အကောင်လေးတွေကို လဲ Range DPS တွေ Care ပေးရင် ကောင်းပါတယ်.အချိန် အနည်းငယ် လောက်ကြာရင် BOSS အပေါင်္ ပြန်တတ်လာ ပါလိမ့်မယ် အဲ့ အချိန်မှာတော့ 1st Phase တုန်းက လိုပဲ Tank တဲ့ သူက Tank DPS ပေးတဲ့ သူကပေးလို့ရပါပီ.အဲ 2nd phase မှာ တော့ 1st phase တုန်းက လို Blue Orb ကို ပစ်စရာ မလိုတော့ပါဘူးနော်.....2nd phase မှာ DPS များများပေးဖို့တော့ လိုပါတယ်.ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ BOSS က 3rd phase မချိန်းမချင်း မြေကြီးထဲ ၀င်လိုက် ထွက်လိုက် နဲ့ ဆော့နေမှာ မလို့ပါ :D……..
3rd phase ကို ရောက်ပီ ဆိုတာနဲ့ AOE Healing က အရေးကြီးပါတယ် ခင်ဗျာ.BOSS က လည်း Heal သမျှ ရဲ့ 20 % လောက်ကို Recover ပြန်ယူပါတယ်….3rd phase မှာ Survival လုပ်ဖို့နဲ့ DPS ကို ကြမ်းနိုင်သမျှ ကြမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်…. Shaman ရဲ့ BL ကို လဲ ဒီ အချိန် မှာ စအသုံးပြုရပါတော့မယ်…ဒီ အချိန်မှာ DPS ကို BOSS only တီးးပေတော့ဘရိုတို့ရေ…..3rd phase ကတော့ Boss spell သိပ်မရှိတော့တာမို့ Healing နဲ့ DPS အပေါ်ပဲ မူတည်ပါတော့တယ်….ကဲ ကံကောင်းကြပါတယ်….
Thanks raid members